Kurbada guud ahaaneed | Suomen Mielenterveysseura
Haddii kurbada iyo xaaladaha adag ay qaataan ugu yaraan lix bilood, marka waxaa iman kara xanuunka dhimirka. Guud ahaanba kurabadu ma aha mid la xidhiidha xaalado gaar ah, sida xaaldaha cabsi kaqabka bulshada, mana aha wax ku soo bood ah sida argaggax qabka. Guud ahaanshada kurbada waxay la xidhiidhaa inta badan xasillooni iyo hurdo darro, daal iyo nasasho la’aan.
Badanaa kurbadu waxay u soo ifbaxdaa si xad dhaaf ah iyo walaac joogto ah tusaale ahaan dhanka dhaqaalaha ama caafimaadka. xataa arrimaha kale ee welwelka leh maskaxda ayay qabsadaan noloshana way xadiddaan. xanuunka kurbada ah waxaa la xidhiidha inta badan xanuun jidh ahaaneed, sida madax xanuun, calool xanuun, dhuunta oo laga dareemo iney wax fadhiyaan ama jidh xanuun. Marmarka qaar waa suurtogal in qofka u xanuunsan kurbada uu raadsado dhakhtar.
Aqoonsashada kurbada guud ahaaneed badanaa waa mid gaabisa, laakiin waxaa jira daryeel xooggan
Dadka inta badan kurbada haysa waxay u yeelaan sabab, sida cadaadiska shaqada, dhanka xidhiidhka lamaanaha ama sababaha kale ee culeyska nolosha. Haddii la fahmo sababaha kurbada, waa suurtogal in qofku dareemo nefis. Sida looga gudbo dareenka kurbadu way fududaan laheyd haddii qofku wax ka qabto sababaha keena dareenka kurbada.
Marka loo aqoonsado dareenka kurbadu inuu yahay mid ka mid ah xanuunka dhimirka, sababaha ka dambeeyaa waxay noqonayaan kuwo aan la garan karin ama ay adag tahay in qof garto. Dadku ma garan karaa calaamadaha uu yeelan karo xanuunka kurbadu, ee waxay inta badan ka shakiyaan inuu yahay xanuun khatar ah, sida kansarka.
Dhacdooyinkii hore ee nolosha ee cabsida iyo khasaaraha lahaa saameyn ayay ku yeelan karaan dareenka kurbada. Kurbadu waxay keeni kartaa dareemo kale oo feejignaan leh: tusaale qofka oo ku mashquula waxa ka dhacaya nawaaxigiisa iyo nafsad ahaantiisaba iyo cabsi xooggan oo ah in wax xun ku dhacayaan.
Xanuunka dareenqabka kurbada dadka la ildaran inta badan ma raadiyaan daryeel la xidhiidha kurbada, laakiin calaamadaha xanuunka dartiis ayey in badan booqdaan xarumaha adeegyada caafimaadka. Daryeelka ugu xooggan ee xanuunkan dareenqabka kurabada waxay noqon kartaa midka teraabiyada cilminafsiga iyo dawada niyadjabka. Dhanka teraabiyada cilminafsiga waxay sahli kartaa yareynta sababaha dareenka kurbada iyo in la helo xal goor hore ah si looga gudbo kurbada, ama looga hortago soo ifbaxa niyadjabka.